Chorionic Gonadotrophin nke Ọgwụ (HCG) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
LHRH-A3 maka Ọgwụ Fish ojiji
LHRH-A2 maka Ọgwụ Fish ojiji
Onyinye S-GnRHa N'ihi Ọgwụ (Ovuhom)
Onyinye Gonadotrophin maka Ọgwụ (Ovumon)
Chorionic Gonadotrophin nke Ọgwụ (HCG)
Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ (m) 【Name of Veterinary Drug】 【Common aha】: Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ (m) 【English Name】: Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ 【Major mgwa】: Chorionic gonadotrophin (HCG) 【Description】: Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ifriizi-Fikiere ngọngọ ekara umi ma ọ bụ ntụ ntụ 【pharmacological mmetụta】: Ịgụ follicle okè maka nwanyi azụ na eji ovulation; gbanwee theca folliculi na granulosa mkpụrụ ndụ n'ime luteal mkpụrụ ndụ; welie ...
Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ (m)
【Common aha】: Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ (m)
【English Name】: Chorionic Gonadotrophin maka Ọgwụ
【Major mgwa】: Chorionic gonadotrophin (HCG)
【Description】: Ngwaahịa a bụ ọcha ifriizi-Fikiere ngọngọ ekara umi ma ọ bụ ntụ ntụ
【Pharmacological mmetụta】: Ịgụ follicle okè maka nwanyi azụ na eji ovulation; gbanwee theca folliculi na granulosa mkpụrụ ndụ n'ime luteal mkpụrụ ndụ; welie secretion nke nwoke mmekọahụ hormone nwoke azụ.
【Egosi】: akwalite mmekọahụ okè ma ọ bụ mee ngwangwa maturation maka azụ
【Ojiji na Ọnụọgụ ọgwụ】:
Mgbe ngwaahịa na-diluted na nkịtị saline, igosi intrapleural injection na n'akuku nke 45 ogo na isi nke azụ pectoral nku azu enweghị ọnụ ọgụgụ
Chub, bighead: 800-1600 nkeji / n'arọ
Clarias fuscus: 3000-3500 nkeji / n'arọ
Gurnard: 1000-2000 nkeji / n'arọ
Ike abuo n'elu onunu ogwu maka nwoke azụ. Na omume nke abụọ injections, 1 / 6-1 / 10 nke ngụkọta onunu ogwu ga-agbara maka oge mbụ. The abụọ ọgwụ e nyere mgbe 8-12 awa. Ọnụọgụ ọgwụ nwere ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ụba maka nne na nna azụ na mmalite nke oge ndị na-akpata itinye n'ọkwa ma ọ bụ na obere nha. N'ihi na ndị ọzọ iche nke azụ, na onunu ogwu nwere ike mụbara ma ọ bụ na-ebelata na dị na n'elu akwụkwọ mgbe na-ewere echiche ahụ n'ezie ọnọdụ.
Cheta na: 4000 nkeji / n'arọ maka bullfrog
【Ihe Mkpa nti】 Ngwaahịa a bụ Biochemical gị n'ụlọnga nke bụ ogbenye na okpomọkụ na-eguzogide ma na-adị mfe na-efunari nrụpụta na mmiri. Ọ ka mma ka nkwadebe tupu ị na-eji ya.
【Nkọwapụta】: (1) 2000 nkeji; (2) 5000 nkeji; (3) 10000 nkeji; (4) 50000 nkeji
【Ngwugwu】: 10 PC kwa ngwugwu, 5 PC maka 50000 nkeji
【Nchekwa】: Kaakwa ya akara tightly, nọgidere na-jụụ, ebe ndị gbara ọchịchịrị
【Oge nke Ndaba】: afọ abụọ
The n'elu bụ usoro onunu ogwu na-atụ aro site na ọkachamara. The kpọmkwem usoro onunu ogwu ga-amụba ma ọ bụ na-ebelata site na-adakarị vetiran soja nwoke dị ka kpọmkwem ọnọdụ.
Previous: Viatamin AD maka Ọgwụ
Osote: Onyinye Gonadotrophin maka Ọgwụ (Ovumon)
1000iu Chorionic Gonadotrophin N'ihi Ọgwụ
Aquarium Fish ozuzu Ovaprim Hormons
Fish ozuzu Ókè mmiri ọgwụ
High Quality Chorionic Gonadotrophin N'ihi ọgwụ
Pituitary Follicle ume Ókè mmiri ọgwụ Maka Ọgwụ (Fsh)
Pituitary Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ Maka Ọgwụ (Lh)
Eme Animal Ókè mmiri ọgwụ